Sawirada todobaadkan baraha bulshada gil gileen: Geesinimada Salman iyo lamaanaha cusub Virat-Anushka – Filimside.net
Sawirada todobaadkan baraha bulshada gil gileen: Geesinimada Salman iyo lamaanaha cusub Virat-Anushka
Waxaa jiraan sawiro baraha bulshada qabsadeen kuwaas oo u gaar ah jilaayaasha Bollywood-ka waxayna isugu jiraan noloshooda gaar ah hawlo shaqo iyo arimo kale.
Geesinimada Salman Khan: Mega Star-kaan waxaa laga soo bandhigay sawir u gaar ah filimkiisa Tiger Zinda Hai oo 22-ka bishan la daawan doono, waana sawir Internet-ka gil gilay oo ah asigoo meel barah ah kula dagaalamao xeywaanka Yeey ee dhulka barafka laga helo.
Virat Iyo Anushka Sawirkooda Kowaad: kadib arooskoodii lamaanahan caanka ah sawir ay si wadajir ah kaga soo muuqdeen ayay baraha bulshada ku qabsadeen waana xili ay meel barah ah joogaan, aragti ahaan iyo nolol ahaan wey is dhameestireen Anushka iyo seygeeda Virat Kohli.
Weliba Anushka gacanteeda waxaa ka muuqato Cilaanka ay arooska ku gashay ayagoo lamaanahan xiliga bisha malabka ku guda jiraan.
Isku Imaatinkii Ranveer Singh iyo Mahesh Babu qof walbo wuxuu islahaa labadan xidig filim ayay isla sameenayaan taasi oo hadal heynta sawiradooda u qaaday balse nasiib daro mashruuc xayeysiin ayay wada sameenayaan labadaan atoore gudaha Hindiya magaca ku leh.
Waxaa Aqrisay 2,806